TURKIGA oo loo gudbinayo dacwad ka dhan ah ciidamada ay Soomaaliya u tababarto | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii TURKIGA oo loo gudbinayo dacwad ka dhan ah ciidamada ay Soomaaliya u...
TURKIGA oo loo gudbinayo dacwad ka dhan ah ciidamada ay Soomaaliya u tababarto
Beledweyne (Dalkaan.com) – Madaxweynihii hore ee HirShabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ka hadlay ciidamada uu madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo geeyey magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan.
Madaxweyne Waare oo la hadlayay TV-ga Universal ayaa sheegay in ciidamada Haramcad iyo Gorgor ay dhowr jeer ka qeyb galeen dagaalo uu dano gaar ah ku wato Farmaajo, ciidamadaas oo ay tababartay dowladda Turkiga.
Waare ayaa sheegay inay ciidankan uga dacwoon doonaan dowladda Turkiga, oo uu sheegay in looga baahan yahay inay dib u eegis ku sameeyso ciidamada ka leexday ujeedkii loo tababaray ee ahaa la dagaalanka Al-Shabaab.
“Dowladda Turkiga oo ciidanka Beledweyne la geeyay tababartay dacwad rasmi ah ayaan u gudbineynaa, waxa aan ka dalbaneynaa in ay dib u qiimeyn ku sameyso siyaasadda amni ee Soomaaliya, ma waxa aad ciidan noogu tababartaan Ciidan aan ogeyn Wasaaradda Gaashaandhigga iyo Ra’iisul Wasaaraha meesha la geynayo,” ayuu yiri Maxamed Cabdi Waare.
Waare ayaa sheegay in ciidankan ay tababareen ee Gorgor ay saddex nin oo isku qabiil ah, oo kala ah Farmaajo, Jeneraal Biixi, iyo taliye urur oo uusan magacaabin, ay u adeegsadeen inay ku weerareen qabiil kale.
Madaxweynihii hore ee HirShabeelle ayaa dalbaday in laga hortago tacadiyo ka dhalan kara Ciidamada gaarka u tababaran ee Villa Somalia geysay Magaalada Baladweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan oo buuq badan ka dhashay.
Qoraal kasoo baxay Golaha Wasiirada ayaa shalay lagu sheegay in ciidamadaas loo adeegsanayo dano siyaasadeed, taasi oo ay ku qeexeen mid lagu dilayo sumcadda ciidanka qaranka.
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay wali rajo ka qabto inay amaah ku hesho Amad Diallo ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga ciyaartoyda...
Maxey tahay sababta Fahad Yasin iyo Yasin Fareey u bixiyeen wareysiyo...
Horudhac: Liverpool Vs Villarreal ee Champions League-ga, Wararka Labada kooxd iyo...
Nuur Iidow oo go’aan lama filaan ah ka qaatay kursiga HOP58...